Arsenal oo xiiseyneysa saxiixa xiddig bar-tilmaameed buuxa u ah Barcelona – Gool FM
(London) 22 Juun 2022. Wargeyska The Athletic ayaa xaqiijisay in Arsenal ay dalab rasmi ah ka gudbisay xiddiga garabka ka ciyaara reer Brazil iyo kooxda Leeds United ee Raphinha, oo sidoo kale bar-tilmaameed u ah Barcelona inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga ee xagaaga.
Arsenal ayaa la rumeysan yahay inay xiriir la sameysay Leeds United Talaadadii, waxaana ay xaqiijiyeen inay doonayaan inay dalab ka gudbiyaan xiddiga heerka caalami ee dalka Brazil, waxaana la rumeysan yahay in dalabka mar hore la gudbiyay.
Warbixinta waxa ay tilmaantay in Arsenal ay si weyn ula dhacsan tahay Raphinha, ayna doonayso inay ku xoojisato weerarka kooxdeeda, balse dalabkeeda aad ayuu uga hooseeyaa qiimaha ay codsaneyso Leeds United inay ku iibiso xiddigan, waxaana la filayaa in la diido
Laacibka ayaa muddo dheer la sugayay inuu ku biiro Barcelona, ​​kooxda reer Catalonia ayaana la fahansan yahay inay tahay dookhiisa uu door bidayo, inkastoo ay adag tahay baacsiga Barca sababo la xiriira dhaqaale xumida heysata.
Kaddib Barcelona, Chelsea ayaa la sheegay inay tahay kooxda labaad ee uu jecel yahay Raphinha, gaar ahaan inay ka qayb gali doonto Champions League xilli ciyaareedka dambe.
Yeelkeeda, Raphinha ayaa laba xilli ciyaareed loo riyaaqay ku qaatay kooxda Leeds United, isaga oo dhaliyay 17 gool oo Premier League ah, kaddib 65 kulan uu ciyaaray, waxaana la rumeysan yahay in Leeds aysan joojin doonin hammiga Raphinha ee ah inuu u dhaqaaqo koox sare inta lagu jiro suuqa xagaagan.